Ụgwọ nke ụlọ ọrụ CEO - Sun Master International Limited
Terry ewerela ọkwa dị elu dị iche iche na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche dị ka onye na-ere ahịa nchara, Aluminom extrusion Sale Manager tupu ọ bụrụ onye isi oche nke Sun Master Internatinal Ltd bụ onye na-emepụta ngwá ụlọ dị n'èzí na imewe na-elekwasị anya na nkwari akụ, okomoko, patio, ojiji nkwekọrịta. A mụrụ ya na Hong Kong wee kwaga Canada na 1988 onye tolitere na Vancouver.
Terry gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Victoria na BC Canada maka Bachelor of Art nke wetara ya ntọala nwere echiche nke imepụta ngwaahịa ọhụrụ. O nyerela ọtụtụ ndị ahịa ya aka ịmepụta na imepụta ihe ruru 1500+ ụdị ngwá ụlọ dị n'èzí na afọ 18 ọrụ ya na China.
O weere dị ka onye na-emepụta ngwá ụlọ dị n'èzí nwere ahụmahụ na ọ nwere ike ịmepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ndị ahịa chọrọ.
- Atụmatụ azụmahịa Strategic na mmepe ụlọ ọrụ
- imewe na imepụta maka tebụl na-adịgide adịgide na nkasi obi, oche, sofa, patio set na ebe ezumike anyanwụ
- Exhitbiton na Germany Spoga, Dubai Index, Salone Del Mobile Milano, CIFF, Canton Fair, Shanghai International Furniture Fair, USA NHS/National Hareware Show, Ngwa ngwa ngwa na ihe ubi, USA International Casual Furniture & Ngwa Ahịa Ahịa Mart Properties, Miami ọbịa imewe ihe ngosi, RUSSIA Mebel, Sydney ọbịa imewe.
- Atụmatụ njikwa maka ihe karịrị ndị ọrụ 300
- hụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-arụ ọrụ n'ime ọkọlọtọ BSCI
- gburugburu ebe obibi na mmepụta nchekwa nchekwa
- Ahụmịhe afọ 15 maka imepụta arịa ụlọ, aluminom extrusion, mkpuchi ntụ ntụ na nhazi Anodize na ọkọlọtọ mba ụwa.
-Anụ ahịa Sun Master kwa afọ USD 12-15 nde ma na-agba mbọ maka uto 20% kwa afọ ebe arịa ụlọ dị n'èzí na-ewu ewu karịa n'ụwa. Enwere m nkwenye siri ike maka ịnye ndị enyi m niile, ndị mmekọ azụmahịa na ebe ahịa uru.